TOP > 外国人介護人材支援（がいこくじんかいごじんざいしえん） > 外国人介護人材 無料相談サポート > ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံခြားသားလုပ်သားများဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန်( မြန်မာဘာသာ )
ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံခြားသားလုပ်သားများဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန်( မြန်မာဘာသာ )
[ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှနိုင်ငံခြားသားလုပ်သားများအတွက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှု] စတင်ပါမည်။
ဤအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့အစည်းသည် ၂၀၀၈ခုနှစ်မှစတင်၍EPA (Economic Partnership Agreement) ခေါ် စီးပွားရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုအစီအစဉ်ဖြင့်သူနာပြု၊ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်း လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခြင်းများကို ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်း တစ်ခုတည်းသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရေးအဖွဲ့ အစည်းအဖြစ်လုပ်သားအယောက်( ၅၆၀၀) ကျော်ကို ဂျပန်ပြည်တွင်းရှိကျန်းမာရေးဌါနများ​​​တွင် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းများကိုလည်း လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်လုပ်သားများနှင့် အလုပ်ခန့်အပ်ပေးသောဌါနများကိုလည်းအထောက်အကူပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
နောက်ပိုင်းတွင်လည်း EPA ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများသာမက ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ပက်သက်သောဝန်ထမ်း၊ အလုပ်သင်လုပ်သား၊ အထူးသတ်မှတ်ကျွမ်းကျင်လုပ်သား (※)လက်ခံခန့်ထားမှူများလည်း တိုးပွားလာရန်ရှိနေပါသည်။ ထိုအခြေအနေတွင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်းများကို ခန့် ထားမည့်ဌါများသည် သက်ဆိုင်ရာစနစ်များ၏ ရည်ရွယ်ချက်၊နည်းလမ်းများကို သေချာသဘောပေါက်နားလည်ပြီးအဆင်ပြေစွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ထောက်ပံ့ဆောင်ရွက်ပေးသွားပါမည်။ ထို့ ပြင်နိုင်ငံခြားသားလုပ်သားများအနေဖြင့်လည်း ဂျပန်နိုင်ငံလုပ်ငန်းခွင်ကို ဆွဲဆောင်မှုရှိ သော ၊အတွေ့ အကြုံတတ်ပညာများကို ကောင်းစွာအသုံးချနိုင်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချရသော လုပ်ငန်းခွင်အဖြစ် ယုံကြည်ခံစားပြီးကြိုးစားသွားနိုင်ရန်စတင်ထောက်ပံ့ပေးသွားပါမည်။
(※) ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းတွင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်း၊ အလုပ်သင်လုပ်သားနှင့် အထူး သတ်မှတ်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားဟူ၍ရှိပါသည်။
<　ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်းများကိုခန့် ထားခြင်းပြုလိုသောကျန်းမာရေးဌါနများအတွက်လမ်းညွှန်　>
【 ဖတ် ရန် 】https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000496822.pdf
【 ပုံနှိပ်ထုတ်ရန် 】https://www. go.jp/content/12000000/000497111.pdf
ဖုန်း (သို့ )၀ပ်ဆိုဒ်ဖောင်မှတဆင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုများလက်ခံပေးခြင်း < မေလမှစတင်မည် >
SNS ၊ Skype ကိုအသုံးပြု၍ဆွေနွေးတိုင်ပင်မှုများလက်ခံပေးခြင်း < သြဂုတ်လမှစတင်မည် >
ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ် အမှတ်စဉ်　၁-အထူးသတ်မှတ်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများအားလက်ခံပေးမည့် ကျန်းမာရေး ဌါနများအား ရှင်းလင်းပြောကြားပေးခြင်း
ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်း ( ၇ )နေရာတွင်ကျင်းပရန်ရှိပါသည်။
ကျင်းပမည့်အချိန်လျှာထားချက် ။ ။ ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလနောက်ပိုင်း
(၉.၅.၂၀၁၉) မှစတင်၍ စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုစတင်ပါမည်။ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေလုပ်ငန်းခွင်တွင်းရှိ နိုင်ငံခြားသားလုပ်သားများအားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားသားလုပ်သားများကိုခန့် အပ်ထားလိုသောကျန်းမာရေးဌါနများမှဆွေးနွေးမှုများလည်းလက်ခံလျှက်ရှိပါသည်။(ဥပမာ- နိုင်ငံခြားသားများကထို့ ပြင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်း　၊ အလုပ်သင်လုပ်သား　၊ အထူးသတ်မှတ်ကျွမ်းကျင်လုပ်သား လက်ခံမှု့နှင့် စနစ်များဆိုင်ရာ မေးမြန်းမှုများကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဂျပန်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေး၊　အလုပ်သမားနှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌါန၏ ဟုမ်းပေ့ခ်ျတွင်လည်းဝင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
သီးသန့် ဖုန်းလိုင်း ၊ ၀ပ်ဆိုဒ်ဖောင်ဖြင့်ဖြေကြားပေးပါမည်။ ( နိုင်ငံခြားဘာသာသုံးနိုင်ပါသည်)
သီးသန့် ဖုန်းလိုင်းတွင်သုံးနိုင်သည့်ဘာသာစကား။ ။ ဂျပန် . အင်္ဂလိပ်.တာဂလော့ဂု.ဗီယက်နမ်.တရုတ်.အင်ဒိုနီးရှား.မြန်မာ
၀ပ်ဆိုဒ်ဖောင် မှဆွေးနွေးပေးနိုင်သောဘာသာစကား။ ။ အထက်ပါဘာသာ နှင့် အခြား
● မြန်မာဘာသာကို ဖုန်းဖြင့်လက်ခံဖြေဆိုနိုင်သော နေ့ ရက်နှင့် အချိန်
တနင်္ဂနွေ တနင်္လာ အင်္ဂါ ဗုဒ္ဓဟူး ကြာသပတေး သောကြာ စနေ
၀ပ်ဆိုဒ်ဖောင်မှဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှူများကို ၂၄နာရီ/၃၆၅ရက် ပိတ်ရက်မရှိပေးပို့ နိုင်ပါသည်။
※ မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖြေကြားမှုများကို ရက်အနည်းငယ်အချိန်ယူပါမည်။
အခြားသောဘာသာစကားများအတွက်လည်းပြင်ဆင်နေပါသည်။　( အသုံးပြုနိုင်လျှင်ဤ၀ပ်ဆိုဒ်မှအသိပေးသွားပါမည်။)
ထို့ ပြင်SNS ၊ Skype ကိုအသုံးပြု၍ဆွေနွေးတိုင်ပင်မှုများအတွက်လည်းပြင်ဆင်နေပါသည်။